Burmese taste - Iora: ထူးဆန်းသောဘလော့ဂင်း
ဘလော့မရေးခင်တုန်းက သိပ်ရေးချင်တာတွေက ကျမတို့ နုိုင်ငံကသဘာဝအရင်းအမြစ်တွေ အကြောင်း ၊ အစားအသောက်တွေအကြောင်း၊ ခရီးသွားအတွေ့ အကြုံတွေအကြောင်း နဲ့ တခါတလေ တခုခုပေါ်မှာ တွေ့ မြင်ခံစားလိုက်ရတာလေးတွေကို ချရေးချင်လို့ ကုိုယ့်ဘာသာဘဲ စာဖတ်ပြီး ဘလော့လေးဖြစ်အောင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။
Burmese taste ဆိုတာကလည်း အဓိပ္ဗါယ်နဲ့ ပါ။ မြန်မာ့အစားအသောက်ရဲ့အရသာတခုတည်းမဟုတ်ပဲ ကျမ မြန်မာတယောက်ရဲ့ တွေးမြင်ခံစားရတဲ့ အရသာ Burmese taste ကို ပါဆုိုလိုချင်တာပါ။ ဥပမာ..ဘိုတယောက်ရဲ့ တောထဲသွားအပန်းဖြေတဲ့ အရသာနဲ့ ကျမမြန်မာတယောက်ရဲ့ တောထဲသွားအပန်းဖြေတဲ့ အရသာဟာမတူပါဘူး။ အဲဒါကိုကျမကွဲကွဲပြားပြားသိပါတယ်။ သူတို့ က အလွန်တိုးတက်နေတဲ့ နေရာတွေမှာမွေးဖွားရှင်သန်ရင်း မြို့ ပြနဲ့ ခြားနားတဲ့ သဘာဝအရသာကို ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီးသွားအရသာခံတာ။ ကျမက တောထဲရောက်သွားရင် သဘာဝရဲ့ အရသာကိုတော့နှစ်သက်စွာခံစားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါတို့ နုိုင်ငံမှာဆုိုရင်..... ငါတို့ နုိုင်ငံမှာဆုိုရင်....ဆုိုတဲ့အတွေးကအမြဲ ကပ်ပါနေပါတယ်။ ကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောပေါ့။ အဲဒီတော့ ကျမခံစားတဲ့ tase က သူတို့ ခံစားတဲ့ taste နဲ့ ကွဲလွဲတာတွေရှိပါတယ်။ ကျမက အဲဒါလေးတွေကို လည်း တခါတရံမှာ မှတ်မှတ်ထင်ထင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ။
သူတုို့ ကသူများကို ဖေးမကူညီဘို့ ကမ်းလှမ်းရမှာကို သူတပါးရဲ့ ကုိုယ်တုိုင်လုပ်ကုိုင်နုိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အရည်အသွေးကုို လျှော့တွက်တယ်လို့ ထင်သွားမှာစိုးလို့ တော်ရုံတန်ရုံ ကိစ္စတွေကို ကမ်းလှမ်းလေ့မရှိပါဘူး။ အကမ်းလှမ်းခံရတဲ့သူကလည်း သူဟာ ဒီကိစ္စကို (ဥပမာ..ဘတ်စ်ကားနေရာဖယ်ပေးတာ၊ မျက်မမြင်တယောက်ကုို အကူအညီမတောင်းဘဲ လမ်းပြပေးတာ၊ အုိုမင်းသူများကိုလက်ကမ်းပေးတာ ..အများကြီးပါဘဲ) လုပ်နုိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့ အထင်ခံရတဲ့အတွက် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာတွေရှိပါတယ်။ ကျမတုို့ ကတော့ အကူအညီကမ်းလှမ်းရင် နွေးထွေးမှု ရှိတယ်လို့ ခံစားရပြီး ယူတာမယူတာအပထား ၀မ်းသာ အသိအမှတ်ပြု လို့ မဆုံးဘူး။ အဲဒီလို ခါးသီးတဲ့ taste တွေ၊ ချိုမြိန်တဲ့ taste တွေ ကွဲပြားတာတွေ နဲ့ တူတာတွေကိုလည်း ရေးချင်မိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ သိပ်အားမထုတ်ရတဲ့ အစားအသောက်တွေဘဲ တင်ဖြစ်နေပါတယ်။
ဘာတွေဘဲရေးဖြစ်ရေးဖြစ် ထူးဆန်းတာတခုက တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ သူတွေ ကိုယ့်ဘလော့ကို လာဖတ်ရင် ပျော်သလို ခံစားနေရတယ်။ မှတ်ချက်လေးတွေ ရင်းရင်းနှီးနှီးပေးသွားပြန်ရင် လည်း တန်ဘိုးထားပြီး ဖတ်ချင်နေမိတယ်။ မမြင်ဘူးတဲ့သူတွေကို အိမ်မက်မက်တယ်။ တိုက်ဆိုင်တာလေးတွေရှိရင် သတိရနေတတ်တယ်။ အဲဒီလိုတွေ ခံစားရလိမ့်မယ်လို့ အရင်တုန်း က လုံးဝမတွေးထားခဲ့မိဘူး။ သိပ်ထူးဆန်းတဲ့ဘလော့ဂင်းပေါ့။ ကုိုယ်မျှဝေမယ်လို့ စဉ်းစားထားတာတွေ မမျှဝေဖြစ်၊ မရေးဖြစ်လို့ လည်း ဘာရယ်မဟုတ် ကုိုယ်ဟာနေရင်းထုိုင်ရင်း တန်ဘိုးမဲ့သူလိုလို၊ အလကားလူလိုလို၊ မြန်မာတယောက်အနေနဲ့ တာဝန်မကျေသလိုလို၊ နေ့ ရက်များကို အချည်းနှီးကုန်ဆုံးစေသူလိုလို..လိုလိုတွေအများကြီးတွေးလာမိပါတယ်။ (အုို ငါလည်း ဘာမှသိပ်သိတာမဟုတ်ပါဘူးလေ။ အို..ငါသိတာတွေ မသိသေးတဲ့သူတွေ ကိုမျှဝေနုိုင်တော့မကောင်းလား။ တော်ကြာငါသေသွားရင် ငါသိထားတဲ့ နဲနဲလေးတောင် ငါ့ကုိုယ်နဲ့ ပါသွားမှာ။) ဘလော့ဂင်းကပေးတဲ့ခံစားမှုတွေလေ မထူးဆန်းဘူးလား။ တခါတလေ ဘလော့ဂင်းလုပ်ခြင်းများကို လျှော့ချဘို့ စဉ်းစားလာရတယ်။ အဲဒီလို တွေးနေတဲ့ အချိန်မှာဘဲ အလုပ်မအားတဲ့ကြားက လှစ်ကယ် လှစ်ကယ် ဟုိုဘလော့သွားလိုက်၊ ဒီဘလော့သွားလိုက် သုတ်သုတ် သုတ်သုတ် လုပ်နေသေးတယ်။
ဘေဘီ့ဟင်းလေးတွေက စားချင်စရာ ဘယ်တုန်းကများစချက်တတ်နေသလဲမသိဘူး။ ကုိုညီလင်းသစ်က အနုပညာခံစားတတ်ပြီး စနစ်ရှိပုံပေါ်တယ် ။ စုဘူးအိမ် နဲ့ မိုးကောင်းသူဟင်းတွေက ထူးဆန်းတယ် ပြီးတော့လည်း သူတို့ ကသူငယ်ချင်းတွေထင်တယ်။ ကူးကူး ကတော့ မြန်မာပြည်အနှံ့ ကချက်ပုံတွေကုို ရှားရှားပါးပါး ချက်တတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တခါတခါ နေမကောင်းတတ်တဲ့အကြောင်းတွေဖတ်ဖူးတော့ သူလေးနေမှကောင်းရဲ့ လား။ နံမည်ကျော်ကြားလူကြိက်များတဲ့ကွန်ကတော့ တခါတခါမှာ ပေါ့ပေါ့လေးရေးနေပေမဲ့ လေးနက်တဲ့ ခံစားချက်များရှိသလိုလိုဘဲ။ သူရေးတာလေးတွေက ဟန်ဆောင်မှုမပါဘူး။ စူးနွယ်လေး ကတော့ လက်ဖက်မကြိုက်ဘူးတဲ့ အဲဒါတော့ အံ့သြစရာ။ ကုိုယ့်ဘ၀မှာ လက်ဖက်မကြိုက်တဲ့သူ နှစ်ယောက် ဘဲတွေ့ ဘူးတာ စူးနွယ်လေးနဲ့ ဆုိုရင် သုံးယောက်ဖြစ်သွားပါရော။ (ဟင် ဟုတ်ပါဘူး တွေ့ လည်းတွေ့ ဘူးဘဲနဲ့ ) စူးနွယ်လျှေက်တဲ့လမ်းလေးမှာ ငှက်လေးတွေလည်းရှိနေမှာ။ မှန်ဘီလူးနဲ့ သွားကြည့်ချင်လိုက်တာ။ ချော ကဖါးကန့် သူလေး စာတွေရေးရင် သေသေချာချာ အချိန်ပေးရေးတယ်။ အလုပ်လုပ်ရင် သပ်သပ်ယပ်ယပ်လုပ်လေ့ရှိပုံပေါ်တယ်။
ညယံဆုိုတာ ယောက်ျားလေးမှတ်နေတာ။ မိန်းခလေးကုိုး။ မောလ်ထဲမှာ အမျိုးသမီးတယောက် ကခွေးလေးတကောင်နဲ့ လျှောက်သွားတာတွေ့ တော့ ကုိုကိုရေ..ညယံဆုိုတဲ့ ဘလော့ဂါက သူများပေးလို့ ခွေးလေးတကောင်မွေးဖြစ်တယ်တဲ့။ အဲဒီခွေးလေးက အရင်ပိုင်ရှင်က တရုပ်လိုနံမည်ပေးထားတာမယ်လင်းဆိုလား မီယောင်းဆုိုလား ဘာလည်းမမှတ်မိတော့ဘူး။ သူကမိုက်တီးလုို့ ပေးတော့ သူ့ နံမည်မှတ်မိအောင် တော်တော်ကျွေးလိုက်ရတယ်။ ခွေးလေးက ဘာသာစကားတွေ အမျိုးမျိုးကို ကြားပြီးရှုပ်ထွေးနေတယ်တဲ့။ တယ်လီဖုန်းလာရင် ညယံကုို ဟောင်ပြီးလာပြောတယ်တဲ့။ အမယ် သူက အဲကွန်းဖွင့်ရင် သူ့ ကော်ဇောလေးချီပြီး အဲကွန်းရှေ့ မှာလာအိပ်ပြီး တီဗီကြည့်ရောတဲ့။ ဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းလဲနော်။ မသက်ဝေ ဆိုတာရှပ်အင်္ကျီဝတ်ရတာကြိုက်ပြီးသူရိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေက မိုက်တယ်။ ရုို့ စ်ဆုိုတဲ့ တယောက် နဲ့ ရုို့ စ် အော့ရှယ်ရွန်း ကို ခဏခဏရောတယ်။ ဆန်းနီလေးက ကျောင်းတက်နေတာဆုိုတော့ စာတွေပိနေမှာသေချာတယ်။ ဂငယ်လေး က အသက် ၂၀ တောင်မပြည့်သေးဘူး ငယ်ငယ်လေး။ ဒါပေမဲ့သူယူတဲ့ဘာသာက ဓါတ်ပုံတုို့ ပန်းချီတုို့ နဲ့ ဆိုင်တာမျိုး။ မြန်မာပြည်မှာဆို အဲဒီဘာသာမျိုးသင်နုိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
မကောင်းမွန်ဝင်းက ဂျပန်ကလေ။ အဲဒါ ဆူနာမီပြီးတော့ ငလျှင်ကြောင့်ဟန်ချက်မမှန်သလို ခံစားနေရတယ်တဲ့။ တော်တော်နေရခက်မှာဘဲ။ ကျေးလက်သားလေး နဲ့ ရွှေညာသားလေးကိုလည်းရောတာဘဲ။ သူတို့ စာတွေက အညာအကြောင်းတွေပါတော့ အညာကုို ခရီးသွားရသလိုဘဲ။ အက်ဗီ ရဲ့ မုန့် လေးတွေက စားချင်စရာ လှလှလေးတွေ။ မွန် ရဲ့ နံမည်က ရှည်ပြီး မှတ်ဘုို့ ခက်တော့ မွန်လို့ ဘဲမှတ်ထားလိုက်မယ်။ မွန်ရဲ့ အမျိုးသားနံမည်ယူထားတာလားဘာလားမသိဘူး။ မမငွေစန္ဒာလည်း အုန်းထမင်းတင်ပြီးကတည်းက အလုပ်များနေပုံဘဲ။ ပါရမီဖြည့်ဘက်လေး ကတော့ လိမ္မာသိမ်မွေ့ တဲ့ဇနီးကောင်းလေးဖြစ်ပုံရတယ်။ ကုိုမြစ်ကျိုးအင်း ဆုိုရင် ရေငှက်တွေအကြောင်း ခေါင်းထဲရောက်ရောက်လာတယ်။ကို မြစ်ကျိုးအင်းကမြစ်ကျိုးအင်းလို့ ဘာလို့ နံမည်ယူထားတာလဲမသိဘူး။ သူရောမြစ်ကျိုးအင်းတွေမှာကျတတ်တဲ့ ရေငှက်တွေကုို စိတ်ဝင်စားလားမသိဘူး။ ကုိုကြီးကျောက်ဆုိုတာ တပင်ရွှေထီးပင်နဲ့ ကင်ဆာသက်သာနေပြီးမှ ဆုံးသွားရှာတာ။ သူလည်း ငါတုို့ သွားတဲ့ နေရာတွေ လပ်စ်ဗေးဂက်စ်သွားတုန်း ကသွားတယ်။ မမြင်ဘူးဘဲတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါလား။ စူစန်တုို့ မကြာညို တို့ က ဘယ်မှာနေတာလည်းမသိဘူး။ဗစ်စတာ လည်း ငယ်ပုံဘဲ။ ခင်ဦးခိုင် ဆိုတော့ ခိုင်ခင်ဦးနံမည်နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် ဒါပေမဲ့ ပိုခန့် ပြီးကဗျာဆန်တယ်။ ဂျီးဒေါ်က ကွန့် သူငယ်ချင်းလားမသိဘူး။
jj ဆိုတာ ထူးထူးဆန်းဆန်း သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးအကြောင်းတွေနဲ့ ငှက်လေးတွေစိတ်ဝင်စားတယ်တဲ့။ မြန်မာထဲမှာ ဒါမျိုးစိတ်ဝင်စားတာ တော်တော်ရှားတယ်။ သိရတာဝမ်းသာစရာဘဲ။ ကေနှစ်လုံးနဲ့ ကေသုံးလုံးကို ခဏခဏရောတယ်။ သွားပြန်ကြည့်ဦးမယ်သူတို့ ကို။ ပေါက်ဆုိုတာ ကေသုံးလုံးလားကေနှစ်လုံးလား။ တခါတခါမှရောက်လာတတ်တယ်။ သုနှင်းဆီကလည်းယူအက်စ်ကဘဲ။ ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်။တီတီစွိ တော့ နေရာသစ်မှာ ပျော်နေပြီလားမသိ။ အော်..ဂျူးဂျူးလေးတောင်မွေးကတည်း ကဖတ်ရင်းကြည့်လာတာ တော်တော်ကြီးလာပါရော။ အင်း သူကြီးလာသလို ငါလည်းပိုအိုလာပါလား။ နုပျိုခြင်းနဲ့ အိုမင်းခြင်း ကုိုသတိပေးတဲ့ဘလော့ပါလား။ အပြုံးပန်း ကတော့နံမည်နဲ့ လိုက်အောင် ပန်းလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ ငါလည်း မြက်ပန်းလေးကအစစိတ်ဝင်စားတယ်သူ့ လိုဘဲ။ ပန်းလေးတွေကလည်းလှတာကိုးလေ။ ရှင်လေးကတော်လည်းတော်၊ ရုိုးရုိုးရှင်းရှင်းခေတ်မှီပြီး စည်ကမ်းရှိပုံဘဲ။ ကုိုကိုရေ..ရှင်လေးရဲ့ အမျိုးသားကလေ တက်စီစီးပြီးပိုက်ဆံအမ်းတာ လှမ်းယူတော့ ကျနော်သူ့ ရဲ့ အိမ်ဦးနတ်ပါတဲ့။ ဟင်း ဟင်း။ လပြည့်ရိပ်က ရှင်လေးနေတဲ့ ဂျာမဏီကဘဲ။ သူ့ ရဲ့ ခရီးသွားဆောင်းပါးတွေသွားပြန်ဖတ်ဦးမယ်။ သူကလူတင်တော်ရုံမက စာရေးကလည်းကောင်းသေးတယ်။ တယ်တော်ကြပါလား။ ငါနဲ့ များတခြားစီ။
ကြည့်စမ်း။ နေ့ တုိုင်းလိုလို အဲဒါမျိုးတခုမဟုတ်တခုခေါင်းထဲရောက်ရောက်လာပြီးလုပ်ရင်းကုိုင်ရင်း ထင်ရာမြင်ရာတွေတွေးနေတတ်ပြီး မမြင်ဘူးတဲ့လူတွေ ကိုသတိရနေတတ်တယ်။ သတိရတာတွေကို သူ့ ကို ထပ်ပြောပြသေးတယ် ။ သူကလည်း တချို့ မှတ်မိပြီး တချို့ မမှတ်မိလို့ ခဏခဏပြန်မိတ်ဆက်ပေးရတယ်။ သူ့ ကုို ပြောပြဘူးတဲ့ အကြောင်းတွေပြန်ဖေါ်ပြီး ပြန်မိတ်ဆက်ပေးရတယ်။ ဘလော့ဂင်းက မဆန်းပေဘူးလား။ ကမ္ဘာ့ နေရာအနှံ့ ကသူတွေအကြောင်းကို မမြင်ဘူး ဘဲတွေးမိ သတိရနေမိပါရောလား။ မမအကြောင်းတွေးတာတောင်နဲနဲလျော့သွားပါလား။ကုိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေရောဖတ်ဖြစ်ကြသလား။ ဖတ်ရင်းနဲ့ အိုင်အိုရာတယောက် တော်တော်အားနေပုံရတယ်လို့ တွေးနေကြသလား။ ကုိုယ်မှန်းမသိတဲ့ကုိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကရော လေယူလေသိမ်းက ............. နဲ့ တူလိုက်တာလို့ တွေးနေကြမလား။
မှတ်ချက်။ ။ဒီတခါတော့ ဟင်းတွေနဲ့ မနှိပ်စက်ပဲ ညီးငွေ့ စရာစကားလုံးတွေနဲ့ နှိပ်စက်နေပါလားလို့ တွေးနေရင်တော့ကုိုယ်ကလည်း ပြန်မေးရလိမ့်မယ်။ အစားစားမလား နားညီးခံမလားလို့ လေ။း)
နောက်ဆက်တွဲတွေဖြည့်သွားမယ်နော်။ ဒုက္ခပေးလက်စနဲ့ ။ သီးခံပေဦးတော့ဆက်တိုက်။
Posted by Iora at 2:19 AM
Baby taster May 14, 2011 at 3:33 AM
ဒါနဲ့ မြစ်ကျိုးအင်း နာမည်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ
သူ့ဘလောဂ်မှာ ရှိတယ် တခါကဖတ်ဖူးတယ်
ရှေ့ ဆက်ပြီ အိုင်အိုရာတယောက် စားကောင်း
သောက်ကောင်းတွေနဲ့ နှိပ်စက်ရင်း ဘလောဂ့်ဂင်းနိုင်ပါစေ
Evy May 14, 2011 at 3:56 AM
Mon Petit Avatar May 14, 2011 at 4:14 AM
I feel the same, it is just amazing to know each other on the net and care to think of them as one of my dear friends!!!!
subuueain May 14, 2011 at 7:03 AM
စိတ်ထဲမှာ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်လို နွေးထွေးမိပါတယ် :)
Anonymous May 14, 2011 at 7:23 AM
ခံစားချက်တွေကတော့ ဆင်နေတယ် အိုင်အိုရာ ရယ်...
ဒီကလည်း ရင်းနှီးနေတဲ့နာမည်တွေနဲ့ မမြင်ဖူးတဲ့လူတွေကို မှန်းပြီးအလိုလို ပုံဖော်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ အပြင်မှာသာတကယ်တွေ့ရလို့ ကိုယ်မှန်းထားတာနဲ့ကွဲရင်တောင် တမျိုးကြီးဖြစ်နေမှာ...။ ဒါလည်းတကယ်တော့ သီးသန့်ကမ္ဘာတခုပဲနော်။
တို့လည်းလေ ခရီးသွားပို့စ်တွေက သွားဖူးထားတာနည်းနည်းကြာရင် ရေးတဲ့အခါစဉ်းစားရတာကြာလို့ ဟင်းတွေပဲ တင်ဖြစ်နေတယ်။ အားမှခရီးသွားပို့စ်အတွက် အားထုတ်လိုက်ဦးမယ်။
တို့တွေတမိသားစုလုံးလက်ဖက်မစားဖြစ်ကြဘူး...အိမ်မှာမ၀ယ်ဖြစ်သ လောက်ပဲ။ သူများဆီမှာကြုံမှသာ လူများနဲ့ရောပြီး နည်းနည်းစားဖြစ်တာ။ မစားသူစာရင်းထဲ လူဦးရေ ထပ်တိုးသွားပြီနော်...:)
အမရေ့ နုိုင်ငံကသဘာဝအရင်းအမြစ်တွေ အကြောင်းနဲ့ ခရီးသွားအတွေ့ အကြုံတွေအကြောင်းလည်းရေးပါအုန်းနော်။ အဲဒါတွေဖတ်ချင်လို့စောင့်နေတာ။ ကျမလည်း ငှက်ကလေးတွေမြင်တိုင်း အမကို အမှတ်ရတယ်။
Iora May 14, 2011 at 9:42 AM
ပထမဆုံးပြောချင်တာက ပို့ စ် ကိုလက်တန်းရေးသွားတော့ ခေါင်းထဲပေါ်သလိုချရေးသွားတာ ကုိုယ့်အတွေးတွေလိုဘဲပေါ့။ ဟုိုတစဒီတစ။ ကုိုယ် တွေးမိတဲ့သူတွေကျန် တာသတိရသွားတုိုင်း ပို့ စ် မှာ လာပြင် ရေးနေတယ်။ နံမည် မရေးမိရင် တောင် ကုိုယ့်အတွေးထဲမှာ တခါမှ မပါဘူးဘူးလို့ မထင်သွားနဲ့ ဦးနော်။ (firefox4တင်ပြီးကတည်းကမြန်မာတုိုက်ပင်း ဒုက္ခပေးနေတယ်။ ဒါလည်းသီးခံပေးကြပါဦး။) ကုိုယ်ကထပ်ထပ်ထဲ့နေမှာ သတိရလာတိုင်း။
ယူကကုိုယ်ဘယ်တော့မှ မမေ့ နုိုင်တဲ့သူ။ ကိုယ့်အကြောင်းစာနဲ့ စမှတ်တမ်းလေးတင်ခဲ့သူ။ ကုိုယ့်ဘလော့ကုို ပထမဆုံးလာလည်ပြီး အားပေးသွားသူ။ ဒီတုိုင်းဆို ဘလော့ဂင်းကို လျှော့နုိုင်ပါ့မလားဘေဘီရယ်။ နှိပ်စက်ခံမယ်ဆိုတော့။း)
မုန့် လေးတွေလှသလို စကားလေးကလည်းလှတယ်အက်ဗီရယ်။
ဒါကြောင့်ထူးဆန်းတယ်ပြောတာပေါ့။ စကားမစပ် မွန့် လိုဘဲ ခေါက်ဆွဲမပါဘဲ ပဲပင်ပေါက်နဲ့ ကုိုက်လံကို ဖတ်ထိုင်းပေ့စ်နဲ့ ကြော်စားတာကောင်းတယ်သိလား။
ကုိုယ်လည်း အဲဒီလိုဘဲ။ ပြောမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဘလော့တွေ စမဖတ်ခင်ကရော စဖတ်တော့ရော ဦးဆုံးစဖတ်တာ စုဘူးအိမ် နဲ့ မိုးကောင်းသူပါ။
ဟယ်..လက်ဖက်မကြိုက်တဲ့သူတွေတိုးလာပါရောလား။ အိမ်နဲ့ ဆန့် ကျင်ဖက်ပါလား။ ကိုယ်တို့ အိမ် ကလက်ဖက် အပြတ်မခံဘူး။ ပြတ်တဲ့ အချိန်ပိုင်းလေးဆုိုရင်တောင် အနီးပါးနားက အိမ်ဆိုင်လေးက သွားဝယ်ပြီးစားကြတာမျိုးရှိတယ်။ ရှမ်းပြည်တုို့ အညာတုို့ ရောက်လို့ ကတော့ လက်ဖက်ကို စပါယ်ရှယ်ဝယ်တော့တာ။ ခရီးသွားဆောင်းပါးတွေသိပ်ကြိုက်တာ။ ပြောရင်းလပြည့်ရိပ်ကိုသတိရလာပြီး ပုို့ စ်သွား ဖြည့်ဦးမှ။ ဖတ်တဲ့သူတွေတော့ ကျိန်ဆဲနေတော့မှာဘဲ။ ဟီးဟီး
ကြည့်စမ်း။ မှတ်မှတ်ရရ ငှက်လေးတွေစိတ်ဝင်စားသူမို့ ခဏခဏတွေးမိတာတောင် ရေးတော့ကျန်သွားတယ်။ အတွေးနောက်လိုက်ရေးနေတော့ ဟုိုရောက်ဒီရောက်။ ဒါကြောင့် ပြောတာပေါ့ ဂျေဂျေရယ်။ နေရင်းထိုင်ရင်းတာဝန်မကျေသလိုခံစားနေရပါတယ်လို့ ။ အချက်အလက်တွေမမှားစေချင်လို့ ကြန့် ကြာနေတာပါ။ အချိန်လည်း ပိုလိုလို့ ပါ။ ကုိုယ့်ကုို အမှတ်ရတယ်ဆုို လို့ လည်းဝမ်းသာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
rose May 14, 2011 at 1:18 PM
အစ်မအိုင်အိုရာ လက်တန်းလေး ချရေးသွားပေမယ့် ဖတ်လို့ အရမ်း ကောင်းပါတယ်။ အစ်မ စဉ်းစားတာတွေ ရို့စ်လည်း တွေးဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ရေးတဲ့ စာတွေက စာဖတ်သူတွေ အတွက် အကျိုးမှ ရှိပါ့မလားလို့။
နောက်လည်း အဲ့လိုလေးတွေ အဆင်ပြေရင် ရေးပါနော်။ အစားအစာလေးတွေရော၊ ဒီလို ပို့စ်လေးတွေရောပေါ့။ ရို့စ်က အနီရောင်နှင်းဆီလေးပါ (redroseofburma) အစ်မရေ။ အစ်မရှာရွန်က (rose-sharon)ပါ။ မမှားနဲ့တော့နော်း))
Iora May 14, 2011 at 1:32 PM
လျှော့ပါမယ်ဆိုမှ ရေးချင်တာတွေကပိုများလာတယ်။ အားပေးတဲ့သူတွေတော့နောင်မှနောင်တရကြမယ်။း)
Nyi Linn Thit May 14, 2011 at 3:40 PM
မမြင်ဖူးကြပေမယ့် တကမ္ဘာလုံးကို လှည့်ပတ်ပြီး သတိရနေတာမို့ ထူးဆန်းသော ဘလော့ဂင်းဆိုတာ အမှန်ပါပဲဗျာ..၊ ကျနော်ရေးဖူးတဲ့ ပြဒါးလင်းဂူ ခရီးစဉ်မှာ ရောက်ဖူးတဲ့အကြောင်း မှတ်ချက်ရေးသွားလို့ မှတ်မှတ်ရရနဲ့ ရှိနေခဲ့တယ်၊ အဲဒီလို ခရီးသွားအကြောင်းတွေ၊ ငှက်ကြည့်တဲ့ အကြောင်းတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအကြောင်းတွေ ရေးဖို့စိတ်ကူး တယ်လို့ သိရတော့ ကိုယ်ကလည်း စိတ်ဝင်တစားမို့ အဲဒီလို ပို့စ်တွေကို စောင့်နေခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒါတွေရေးဖို့က တခါတခါ Ref. လိုသလို၊ စိတ်မပါရင်လည်း ဘာမှမထွက်တတ်လို့ အတင်းအကျပ်ကြီး ကျနော် မတောင်းဆိုခဲ့ပါဘူး၊ အခုကလည်း ဒီပို့စ်လေးမှာ ဖတ်ရရင်း ကြုံကြိုက်လို့ ပြောဖြစ်သွားတာပါ၊ အဆင်ပြေမှ ရေးပါ၊ ငါတော့ အချည်းနှီး၊ အကျိုးမဲ့ ဖြစ်နေပြီလို့ မထင်လိုက်နဲ့ ဦးနော်..၊း) ဟင်းတွေကို ပုံထဲမှာ မြင်ရတာနဲ့တင် သွားရည်ကျလာအောင် ချက်တတ်၊​ တင်ပြတတ်တာဟာလည်း အနုပညာ တရပ်ပါပဲ၊ ဒါတွေပဲ ဆက်ရေးဖြစ်လည်း ဆက်ငမ်း..အဲ.. ဆက်ပြီး အားပေးနေမှာပါပဲ..။းD
Iora May 14, 2011 at 3:54 PM
ရွှေသမင်အကောင်မှန်းမသိ ယမကာမှန်းမသိရေးခဲ့လို့ ဒီကလည်းမှတ်မှတ်ထင်ထင်ဖြစ်သွားတာ။
သိပ်အားပေးတတ်တယ်နော်။ လျှော့မယ်လုို့ တွေးနေရင်းက တိုးရမလိုဖြစ်နေပြီ။ အိမ်ပြန်ပြီး ကုိုယ့်ဒိုင်ယာရီတွေနဲ့ ခရီးသွားတုိုင်းရေးတဲ့ မှတ်စုတွေဓါတ်ပုံတွေယူချင်လိုက်တာ။ ငှက်ပုံကတော့ကုိုယ်ပိုင်မရှိသလောက်ပါဘဲ။ ရုိုက်နုိုင်လောက်တဲ့ ကင်မရာမရှိလို့ ။ တက်သစ်စကလောင်တွေပြောသလို ဆက်ကြိုးစားပါဦးမယ်ပြောရအောင်ကလည်း ဘာမှကောင်းတာမရှိ။ ကလောင်မကျ ခဲတံမကျနဲ့။ တော်တော်ထူးတဲ့ဘလော့ဂင်း........ဟင်း (သက်ပြင်းချသည်)
ဂငယ် May 14, 2011 at 5:19 PM
ဂငယ်လေးက အသက်၂၀ပြည့်သွားတာ ၁လတောင်မရှိသေးဘူး..
စာလုပ်နေရတာနဲ့ ဘယ်သူ့မှ အသိမပေးလိုက်ရဘူး...
အခုလို သတိတရနဲ့ ထည့်ရေးပေးလို့ကျေးဇူးပါနော်.. :)
Iora May 14, 2011 at 9:41 PM
ထဲ့ရေးတာကအတွေးထဲရောက်ရောက်လာတဲ့ သူဗတွလေ။ ကုိုယ်ချင်းစာတယ်။ ဒီမှာနေ့ တို်င်းစာလုပ်တာတောင်အလျင်သိပ်မှီချင်တာမဟုတ်ဘူး။ ကြိုးစားခလေးရေ။ ကုိုယ်စိုက်တဲ့အသီးကုိုယ်စားရမှာပါ။
အပြုံးပန်း May 14, 2011 at 10:53 PM
သတိယလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အိုင်အိုရာ၊
ဒီလိုပိုစ့်လေးတွေ ဖတ်ရတာ အရသာရှိလိုက်တာ၊
မမြင်ဖူးပေမယ့် စာတွေဖတ်တာနဲ့တင် ရင်းနှီးနေသလိုပဲ၊
စကားလုံးတွေထဲမှာ စိတ်သရုပ်ဖော်၊ လူသရုပ်ဖော်တွေ ပါနေတယ် ထင်ပါတယ်။
ပန်းတွေကို စိတ်ဝင်စားသလို ဟင်းချက်တာလဲ စိတ်ဝင်စားပါတယ်၊
ချက်ပြီး မတင်ဖြစ်ပေမယ့် ထူးထူးဆန်းဆန်းလေး တွေ ချက်စားဖြစ်တယ်။
ပါရမီဖြည့်ဖက်လေး May 14, 2011 at 11:12 PM
ဟုတ်တယ်နော်။ တကယ်ထူးဆန်းတယ်။ မမြင်ဖူးတဲ့ သူတွေကို စိတ်မှန်းနဲ့ ပုံဖော်ကြည့်ရင်း စိတ်ထဲမှာ ရင်းနှီးခင်မင်မိနေတယ်။ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းလည်း သတိရမိတယ်။
khin oo may May 15, 2011 at 3:14 AM
ဟုတ်တယ် အမှန်တော့လေးနက်တဲ့ခံစားချက်တွေ ရျိတယ။် ဒါပေမဲ့သူများတွေ ကို စိတ်မညစ်စေချင်လွန်လို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်မညစ်ချင်လို့။
Shinlay May 15, 2011 at 3:18 AM
သက်ဝေ May 15, 2011 at 6:44 AM
ဟုတ်တယ် အိုင်အိုရာ... ကိုယ်လည်း အဲဒီအကြောင်းကို မကြာခဏ တွေးမိတယ်... သိပ်ထူးဆန်းပြီး နီးကပ်တဲ့ ရင်းနှီးဆက်သွယ်မှုတွေပဲ... သတိရသူတွေရဲ့ စာရင်းထဲ ကိုယ့်ကို မှတ်မှတ်ထင်ထင်ရှိနေတာ ကျေးဇူးတင်ရင်း ဝမ်းသာနေပါတယ်...
yar zar May 15, 2011 at 6:51 AM
အဲဒါ အမှန်ပဲ အစ်မရေ.. မမြင်ဖူး၊ မတွေ့ဖူးကြပေမယ့် ဘလော့ဂ်ဂါတွေ
အချင်းချင်း သံယောဇဉ်တွေ ဖြစ်နေကြတယ်နော်...။ တစ်ယောက်ကိုတ
စ်ယောက်က အားပေးလို့.. ၀ါသနာတူသူတွေ စုမိနေတော့ ပိုပြီး သံယော
ဇဉ်ဖြစ်မိတာ ထင်ပါရဲ့.. မမြင်ဘူး၊ မတွေ့ဖူးပေမယ့်လည်း ပေးထားတဲ့ နာ
မည်လေးတွေ အတိုင်း ပုံဖော်ဖော် ကြည့်မိတယ်..။ ကျေးလက်သားလေး
ကတော့ အညာ အကြောင်းလေးတွေကို ရေးလို့ ရတဲ့အ ချိန်ထိ ဆက်ရေး
သွားအုံးမှာပါ..။ အစ်မ အိုင်အိုရာ.. ဆက်ပြီး ဘလော့ဂ်ဂင်းနိုင်ပါစေလို့... ကျေးလက်သားလေး က ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျ...
Iora May 15, 2011 at 8:46 AM
စကားလုံးတွေကနေဘဲ ပုံဖေါ်ကြည့်နေမိကြတဲ့ကုိုယ်တို့ ရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ဘ၀လေ။ နော်။
ကုိုယ်ဆိုကွင်းဆင်းတုိုင်း အနီးကြည့် မှန်ဘီလူးအသေးလေး ယူယူသွားပြီ တောပန်းသေးသေးလေးတွေ ကိုကြည့်တယ်။ (အလုပ်နဲ့ တုိုက်ရုိုက်မဆိုင်ဘဲ။) တချို့ ကမျက်လုံးနဲ့ သိသိသာသာမမြင်ရပေမဲ့ မှန်ဘီလူးထဲမှာ သူ့ ရဲ့ အစင်းအကြောင်းတွေ၊ အစက်တွေ၊ မြင်ရတာသိပ်သဘောကျဘို့ ကောင်းတာဘဲ။ သိလား။ ထပ်လာလည်ပြီး မွှေနှောက်ဖတ်ဦးမယ်နော်။
ဒါကြောင့်ထူးဆန်းတယ်ပြောတာပေါ့။ နဲနဲမဟုတ်ဘူး တော်တော်ကို ထူးဆန်းတာနော်။ အပြင်မှာသိနေတဲ့သူတွေကိုတောင် တော်ရုံနဲ့ သတိရနေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေနော်။
စိတ်ညစ်စရာဆိုတာ လူတိုင်းနီးနီး တမျိုးမဟုတ်တမျိုးရှိကြတာပါဘဲ။ ဖွင့်ပြောတာနဲ့ မပြောတာဘဲကွာမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာကြီးကမဆုံးသေးပါဘူး။ ၀မ်းသာစရာတွေအမြဲမရှိသလို ၀မ်းနည်းစရာတွေလည်းအမြဲရှိမနေပါဘူး။
ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် ကိုယ်တို့ ဆွေမျိုးတွေ။း)
အိမ်ဦးနတ် ပို့ စ်လေးနဲ့ ဦးထုတ် ပို့ စ်လေးကိုတော့ကိုယ်ကသိပ်သဘောကျတာရှင်လေးရေ။
ဟုတ်တယ် သိပ်ထူးဆန်းတယ်နော်။ ပြင်ပလောကကဆက်ဆံနေရတဲ့သူတွေထက် ပိုသတိရမိနေတတ်တယ်။နော်။ ကုိုယ်ရှပ်အင်္ကျီဝတ်ရင်တောင်သတိရနေမိတာ။ တကယ်။
ကျေးလက်သားလေးကိုမှတ်မိသွားပါပြီ။ အညာကို အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ ဝင်ခလုတ်ထွက်ခလုတ် ခဏခဏရောက်ဘူးတော့ ကုိုရာဇာလေးစာတွေဖတ်တော့မျက်လုံးထဲကို ပီပီပြင်ပြင်မြင်ယောင်မိတယ်။ ကုိုယ်ကလည်းဖတ်လို့ ရတဲ့အချိန်ထိဆက်ဖတ်နေဦးမှာပါ။ ရေးသာရေး အားပေးလျှက်ပါ။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) May 15, 2011 at 11:16 AM
အင်တာနက်မရလို့ ခုမှ ရောက်လာနိုင်တယ်
သတိရတဲ့အတွက် ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ အင်တာနက်မရနိုင်တဲ့ ရက်တွေမှာလည်း ချစ်ခင်ရတဲ့ ဘလော့ရေးဖော်တွေကို သတိရနေခဲ့မိတာပါ။
ခုလို ကိုယ့်ကို သတိတရရှိတာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ထင်မြင်ချက်လေးအတွက်လည်း ကျေးဇူးအထူးပါ။
ထပ်တူညီစွာဘဲ ဘလော့ရေးခြင်းအပေါ် သံယောဇဉ်ကြီးရသလို ဘလော့ရေးသူချင်းချင်းအပေါ်မှာလည်း သံယောဇဉ်ကြိုးတွေနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ သံယောဇဉ်တွေနဲ့ပါလို့...
Iora May 16, 2011 at 12:15 AM
ဟူး..ခုမှဘဲနားရတော့တယ်။ နားတာနဲ့ ကွန်ပြူတာဖွင့်တာဘဲ။
ကုိုယ်လည်းမရလို့ နောက်ဆုံးပို့ စ်တောင် ပျောက်သွားပြီးပြန်ရတော့ ကွန်မန့် တွေမရှိတော့ဘူး။ တကယ်သတိရတာပါ။ ချောက ကချင်ပြည်ကဆုိုတော့ပိုသတိရစရာပေါ့။ ကုိုယ်ကကချင်ပြည်ကိုသိပ်စိတ်ဝင်စားတယ်လေ။
ညယံ May 16, 2011 at 6:05 PM
သိပ်ထူးဆန်းတဲ့ ဘလော့ဂင်းဆိုတာ မှန်တယ်နော်.. တခါတလေများ မမြင်ဘူးတဲ့ ဘလောဂါတွေကို စိတ်ထဲကမှန်းပြီး ပုံစံဖမ်းကြည့်မိတာ ခဏ၊ခဏပဲ။
ပို့ စ်အသစ်တွေများ တင်ပြီဆို ရှိတဲ့ အလုပ်တွေ အကုန်ပစ်ထားပြီး ဖတ်ချင်မိတယ်။
အိုင်အိုရာ ရေးထားတာလည်း ဖတ်လို့ အရမ်းကောင်းတယ် နောက်ဆက်တွဲလေးတွေလည်း အချိန်ရရင် ထပ်ဖြည့်ပါအုန်းနော်..
Iora May 16, 2011 at 10:19 PM
ဟုတ်တယ်နော်။ တကယ်ထူးဆန်းတာ။ ပို့ စ်အသစ်တင်ရင်ချက်ချင်းဖတ်ပြီးချက်ချင်းကွန်မန့် ကပေးချင်သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ကွန်နက်ရှင်ပေါ်မူတည်ပြီး မြန်တာနောက်ကျတာဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။
မိုက်တီးရောကျန်းခန့် သာလို့ မာပါစ။ အချိန်မလောက်လို့ အိပ်ရေးပျက်တာတွေလည်းများနေပြီညယံရေ။း)ထပ်ဖြည့်စရာလေးတွေတော့ရှိပါတယ်။ သတိရလာတိုင်းလေ။
အမရေ...ကျမကို သတိတရနဲ့ ထည့်ရေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စိတ်ဆိုတာမျိုးက လူချင်းမမြင်ဘူးတောင် ဆက်နေတတ်လားမသိပါဘူးနော်။ ကျမလေ ကျမတို့နိုင်ငံက တိမ်မြုပ်နေတဲ့ အလှတွေ၊ ရှေးဟောင်းအမွေတွေ၊ သဘာဝရင်းမြစ်တွေ၊ ကျေးငှက် ပန်းမန် တိရိစ္ဆာန်တွေကို တန်ဖိုးနားလည်ပြီး ထိန်းသိမ်းတတ်တဲ့ သူအရမ်းဖြစ်ချင်ခဲ့တာ။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ အလှတွေကို မြင်တတ်လာတဲ့အချိန်မှာ ကျမက အိမ်အပြင်ရောက်နေခဲ့ပီ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆိုင်ရာတွေကို မြန်မာလိုရေးထားတာကလည်း အရမ်းရှားတယ်လေ။ အဲဒါကြောင့် အမကို တောင်းဆိုတာပါ။ အမဖက်က အခက်အခဲကို လည်းနားလည်ပါတယ်။ အခွင့်သာရင်တော့ ရေးပေးပါနော်။
Iora May 17, 2011 at 4:09 PM
စိတ်ဆိုတာတခါတလေထူးထူးဆန်းဆန်းဆက်သွယ်မှုရှိတတ်တယ်လို့ ဒို့ လည်းထင်တယ်။
ဟုတ်တယ် အဲဒါကြောင့်ကုိုယ်ကတာဝန်မကျေသလို ခံစားရတယ်လို့ ပြောတာ။ မြန်မာလိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေအရမ်းရှားလို့ လေ။ ဘာအကြောင်းဖြစ်ဖြစ် များသောအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ကိုဘဲရှာဖတ်ရတယ်။ အေးလေ..ခေတ်တွေသာပြောင်းလာတယ်။ ကိုယ်တို့ တုိုင်းပြည်ရဲ့ ပညာရေးစနစ်ကမှ မပြောင်းလာဘဲ။
အခွင့်သာတာနဲ့ ရေးပါမယ်နော်။ လောလောဆယ် နှစ်လသုံးလလောက်မှာ အလုပ်ကိစ္စတွေသိပ်များနေလို့ ရေးနုိုင်ပါ့မလားမသီ။ ဂျေဂျေတို့ လို လူမျုိုးတွေ အများစုဆုိုတိုင်းပြည်အတွက် သိပ်ကောင်းမှာ။
အားတော့မှသာရေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမ။ စနစ်ကတော့အမရယ်...
မြစ်ကျိုးအင်း May 18, 2011 at 1:53 PM
မမြင်မတွေ့ဖူးကြပေမယ့် စာဖတ်ရုံ၊ အပြန်အလှန်သွားလာလည်ပတ်ရုံနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ဖြစ်စေတာလည်း အွန်လိုင်းစာပေလောကနဲ့တူပါရဲ့။
မြစ်ကျိုးအင်း မှာ ရာဇဝင်ရှိတယ်။ ပြန်သိမ်းထားတဲ့ ပို့စ်လေး ကြုံမှ ဖွင့်ပြတာပေါ့။
An Asian Tour Operator May 18, 2011 at 11:12 PM
ဘလောက်ဂါတွေထဲ မှာ ငှက် နဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အကြောင်း စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတစ်ယောက် တိုးလာလို့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ရပါတယ်။ ဟင်းလဲ ချက်ပါ။ ငှက်အကြောင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အကြောင်းလေးလဲ ဆက်ပါ။ :)
Iora May 19, 2011 at 4:10 PM
ဟုတ်တယ်နော်။ တကယ်ရင်းနှီးနေသလိုဘဲ။ ရာဖ၀င်ကုိုတင်မက တခြားစာတွေပါ လာမွှေဖတ်မလို့ မအားလို့ အကုန်လာမဖတ်ဖြစ်သေးတာ။
ကောင်းမွန်ဝင်း May 20, 2011 at 7:36 AM
ကျွန်မလည်း စူးနွယ်လေး လ္လက်မစားတာကို အံ့သြစွာမှတ်မိနေမိတယ်။ အဲဒါ ကျွန်မနဲ့ အိုင်အိုရာ ရဲ့ လ္ဘက်ကိုမိုးလင်းမိုးချုပ်စားလို့ရအောင် ကြိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် သဘာဝကို မှတ်မှတ်ထင်ထင်ဖြစ်သွားကြပုံပဲနော်။
အများကြီးပါ။ ဘလော့ဂ်ရေးသူတွေကော၊ မရေးပဲလာအားပေးနေသူတွေကော။
မမြင်ရတဲ့ စိတ်နဲ့လူတွေကို၊ မမြင်ရတဲ့ သံယောဇဉ်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်မိနေကြတယ်။
အိုင်အိုရာရဲ့ အစားအစာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခံစားချက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးကို အားပေးနေချင်စိတ်အမြဲရှိပါတယ်။
Iora May 20, 2011 at 3:46 PM
မကောင်းမွန်ဝင်းတို့ လက်ဖက်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့တောင် အိမ်ကိုသတိရမိတယ်တူလို့ လေ။
ကျမရဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ အစားအစာတွေကို အားပေးမယ်ဆိုတော့ပိုအားရှိတာပေါ့။ ကျေးဖူးတင်ဝမ်းသာရပါတယ်။
Мо Мьинт Зо May 21, 2011 at 8:39 AM
ရွှေညာသားလေး May 21, 2011 at 8:48 AM
အိုင်အိုရာ ဒီပို့စ်လေး တင်ပြီးစက လာဖတ်သေးတယ် အရေးတကြီးနဲ့မို့ မမန့်ဖြစ်ခဲ့တာ။ ဒါကတော့ နောက်တစ်ခေါက်ပေါ့ဗျာ။ ဖတ်ပြီးတော့ သဘောကျမိတယ်။ ကျွန်တော်လည် စိတ်ကူးထဲမှာ ရေးမိနေတာပဲ။ အိုင်အိုရာက ချရေးလိုက်တော့ ပိုကောင်းသွားတာပေါ့။ ဟုတ်လည်း ဟုတ်ပါ့နော် လူတွေကို မြင်ဖူးတာမဟုတ်ဘဲ ရေးထားတဲ့စာလေးတွေကို ဖတ်ပြီး စကားလုံးလေးတွေကနေ ပုံဖော်ပြီး ရင်းနှီးနေကြတာ ထူးဆန်းပါပေ့ဗျာ။ အပေါ်က မန့်တာက နာမည်မသိမှာစိုးလို့ ဖျက်ပြီး ပြန်မန့်လိုက်တာနော်။
Vista May 23, 2011 at 1:57 AM
ဟင်း ဟင်း .. ကျိန်းဝါးနေတာမဟုတ်ဘူး ဟင်းမကောင်းလို့ ဟင်းလာတောင်းတာ ဟိ
Anonymous May 24, 2011 at 7:30 AM
Thanks for your part of mind to me.It's true..we all(both bloggers n readers)have mutual attachment.I still don't have my blog cos of my laziness to practise Burmese typing.I love nature and any kinds of art but no creativity:)
Iora May 25, 2011 at 11:37 PM
သဘောကျတယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မအားလို့ ခုမှပြန်ရေးဖြစ်တာခွင့်လွှတ်ပါ။ မအားတဲ့ကြားထဲက လာပြန်ရေးလိုက်တယ်နော်။
ကြိုက်တဲ့ဟင်းယူသွားပါ..လောလောဆယ်တော့ ချက်တဲ့ဟင်းတောင်ဓါတ်ပုံမရိုက်ဖြစ်ဘူး။ အားတော့မှ ဗစ်စတာကြိုက်တဲ့ဟင်းချက်ပေးမယ်နော်။ ဘာကြိုက်လည်းပြောထားအုန်း။ ဟုတ်လား။
ဟင်း..ဟင်း..မစလိုက်လေနဲ့ လို့ အားပေးရမလိုဖြစ်နေပြီ။ စလိုက်ရင်တော့ စားလည်းဒီစိတ်သွားလည်းဒီစိတ်နဲ့ အိပ်ရေးတွေပျက်ကုန်တော့မယ်။ ဂျီးဒေါ်ရဲ့ သူများတွေကိုမန့် တာလေးတွေဖတ်ရင်း ရင်းနှီးနေတာကြာပါပြီ။
I already have that problem(sar le de sait,twar le de sait)I bring my blogger friends around Switzerland in mind.I just remember like my closed friends wherever i go,whatever i cook and eat,anykind of ceremony i attend,whenever i see beautiful scene............:)
မအိမ်သူ June 3, 2011 at 1:26 AM
ဟုတ်ပါ့ရှင် တကယ်ကို ထူးဆန်းပါတယ်။ မအိမ်သူဆို အစက စာဖတ်သူ သက်သက်ပါ။ တိတ်တိတ်ကလေး စာတွေလိုက်လိုက်ဖတ်ပြီး ကွန်မန့်တွေဘာတွေလဲ ပေးလေ့သိပ်မရှိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါဟိုး လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်ကတည်းက ဘလော့ဂ်တကာ လည်ပြီးစာဖတ်လာခဲ့တာပေါ့။ ဘလော်ဂါတွေအားလုံးကို ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ တရင်းတနှီးသိလို့။ အခုမှ စိတ်ကူးလေးပေါ်ပြီး ဘလော့ဂ်လေးစရေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်စိတ်ထဲရင်းနှီးနေတဲ့ ဘလော်ဂါ တစ်ယောက်ယောက်ကများ ကော်မန့်လာပေးသွားရင် စိတ်ထဲမှာ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြန်ဆုံလိုက်ရသလိုမျိုးခံစားမိတယ်။ ငယ်ပေါင်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောသလိုမျိုး တရင်းတနှီးပြန်ပြောမိတယ်။
မေသိမ့်သိမ့် ကျော် June 4, 2011 at 11:54 AM
Iora June 12, 2011 at 10:00 AM
ဟုတ်တယ်။ ဟုတ်တယ် ကိုယ်လည်းကုိုယ်ဖတ်ပြီးရင်းနှီးနေတဲ့ ဘလော့ဂါတွေကိုခုတော့ ပိုပြီးရင်းနှီးခင်မင်သွားတယ်။း)
လာလည်လို့ ကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာရပါတယ်။ နောင်လည်းလာလည်ဘို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေနော်။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မှတ်ချက်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာရပါတယ်ရှင်။
လာလည်ပြီးမှတ်ချက်လေး ပေးသွားလို့ ကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာရပါတယ်။ နောင်လည်း လာလည်ပါလို့ ဖိတ်ပါရစေ။
လပြည့်ရိပ် June 22, 2011 at 1:43 PM
မကြာမကြာရောက်ပါတယ်။ ရောက်ဖြစ်တိုင်း လှပတဲ့ ဟင်းတွေနဲ့ကြိုဆိုနေလို့ သရေကျ ပြီး ပြန်သွားရတဲ့ အကြိမ်များပါတယ်။ ဒီတခါမှာတော့ ကျမကိုမှတ်မှတ်ရရ ထည့်ရေးထားလို့ ကျေးဇုးလည်းအများကြီးတင်မိပါတယ်။ ဒီလို ပိုစ့်မျိုးလေးတွေဖတ်ရတာ အားရှိတယ်။ မိသားစုဆန်တယ်လို့ ခံစားရတယ်လေ။ နောင်လည်း အမြဲလာအားပေးနေပါ့မယ်လို့ .. :)
Iora June 24, 2011 at 2:01 AM
လာလည်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောင်လည်းလာမယ်ဆုိုလို့ အမြဲကြိုဆိုနေပါတယ်။ လပြည့်စီကုိုလည်း အမြဲလိုလိုရောက်ပါတယ် အားတာနဲ့ ။ သဘောလည်းကျပါတယ်။